Ifulethi ngalinye lihlanganisa izinto ezincane ezincane ezivame ukulahlekelwa futhi azikho indawo yazo yokuhlala unomphela. Lesi simo senzeke esikhwameni sesifazane, ekhoneni lendodakazi, emgodini nakwamanye amakamelo. Ukuqeda ukungcola, kuwukuhlakanipha ukwenza umhleli wezinto ezincane ngezandla zakho. Ngalo, uzothola masinyane lokho okufunayo. Ngenxa yamahhovisi atholakalayo, uthola njalo izihluthulelo, izimonyo, izambulela, ama-combs, amaglavu, amathoyizi nezinye izinto eziningi ezincane ngesikhathi.
I-reticule yamantombazane iqukethe izinto eziningi ezincane okuvame ukuzenza. Ngaphezu kwalokho, kunzima ukushintsha izinto ezinjalo kusuka esikhwameni esisodwa kuya kwesinye. Umhleli wezinhlanzi uzokusiza ukuqeda le nkinga. Indlela yokwenza into enjalo ngezandla zakho, sizoxoxa ngalokhu ngokuningiliziwe.
Okokuqala, udinga ukudweba iphethini efana nobukhulu bezinto ezizobekwa emkhiqizo ozayo. Sika umugqa olingana no-24 cm no-65 cm kanye nesabelo esingu-1 cm ohlangothini ngalunye, ucabanga ukuthi amakomidi amabili azoba nobubanzi obuyi-14 cm, ama-compartments angu-10 - u-10 cm ngamunye, no-7 cm.
Okwesibili, sikhetha 2 ukusika kwendwangu ezithakazelisayo ngembala ehlangene ye-front ne-underside. Usebenzisa iphethini, udwebe ngendwangu ngayinye yendwangu eceleni kwegceke, bese uwasika.
Okwesithathu, ngesabelo esingu-1 cm, ubeke izingxenye ezimbili ezinhlangothini ezintathu, uzihlanganise ubuso nobuso. Ngendawo engasusiwe, gwema umugqa, uqondise amagumbi awo ngombusi, unamathele nge-sushi noma inaliti, uqoqe amabhande amancane. Bese ugoqa uhlangothi oluvulekile ngombono ofihliwe.
Okwesine, faka insimbi bese uyifaka emgodleni ukuze ubude besikhombisini bube ngu-10 cm, kanti ingxenye engemuva - 14 cm. Sula umkhiqizo ezinhlangothini, ubeke imigqa, udale amapokhethi.
Umgqugquzeli obangelwayo angafakwa futhi agxilwe nge-Velcro noma inkinobho. Uma indwangu iqinile, ungahlobisa umkhiqizo nge-embroidery noma usebenzise. Ufunde ukuthi ungenza kanjani umhleli we-trivia. Ithimba eliyinhloko lichaza ukulandelana kwezenzo.
Izinto ezifana nezihluthulelo, izambulela, amagilavu, ama-combs, ama-creams kanye nama-brushes amajazi athambekele ekulahlekeni emgodini ngesikhathi esibucayi kakhulu. Ukuze ugweme lokhu futhi ungabi sekwephuzile emsebenzini noma umhlangano, ungadonsa umhleli ngezandla zakho. Ufakwa odongeni noma ekugcineni kwekhabhinethi futhi kunezikhwama eziningana ezahlukahlukene. Amahhovisi amancane angaqukatha izinto ezincane, izinto ezinkulu - ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, iphaneli yokuqala izosebenza njengesici sokuhlobisa ngaphakathi.
Indlela yokuqoqa amapokhethi wezinto ezincane wena: isigaba samakhono
Isisekelo samaphakheji esikhathi esizayo senziwa yinkimbinkimbi, mhlawumbe, indwangu yensimbi. Uma kunesidingo, i-substrate ingenziwa ngokuphindaphindiwe ngezindwangu ezingelusiwe. Amapokhethi angasetshenziswa kuncibilike kunoma yimuphi umkhiqizo ofanelekayo, okumele uqiniswe ukuqiniswa nge-hoe. Amapokhethi angaba ama-bulky noma aphansi. Ivolumu itholakala ngokudala ipulazi phansi kwepokhethi.
Izigaba ezihlangothini zalezi zingxenye ziphathwa nge- oblique bake, ezingenhla ezingenhla. Ehlangothini elingaphansi elingalutholi, amapulangwe amabili aphikisanayo ahlelwe. Khona-ke ipokhethi kufanele ifakwe kwisisekelo endaweni yayo yesikhathi esizayo, phezulu ekugcineni phansi, ubambe ukusika ngezinhlaka. Uzothola isikhwama esiphenduliwe ngaphakathi ngaphakathi. Ingxenye ne-cut cut engezansi igxilile phansi, bese isikhwama kufanele sikhuliswe phezulu. Ehlangothini olungaphambili, izingxenye ezihlangothini zikhonjiswe eceleni komugqa we-oblique bake.
Amapokhethi angajulile angafakwa inkinobho ezinkinobho noma izinkinobho. Umhleli onjalo owenzela izinto ezincane ngezandla zabo akulula ukwenza, kodwa ngeke kube yilapho esivumelwaneni, kodwa futhi endlini yokugezela.
Ukuze ufundise ingane ukugcina ukuhlanzeka ekamelweni labantwana, udinga ukuba ne-lockers amaningi, amakhofu ezitsheni, amashalofu, amabhokisi. Inketho elula yokubeka izesekeli ezincane, izingono, amabhodlela, ama-napkins, ama-powders, ama-diapers angaba umhleli ngendlela yokubopha amapokhethi.
Umama ngamunye osemusha unesithakazelo ekufundeni ukuthunga izikhumba zezinto ezincane ngezandla zakhe. Iklasi elihle ekudaleni idivayisi elula ichazwa ngezansi.
Sidinga izinhlobo ezimbili zendwangu - eyona eyinhloko yokuqedela, ibhande elisezingeni eliphansi, amapokhethi asekelayo, amakhadibhodi, ukuqinisa ifomu. Umhleli angaba oqondile noma oqondile. Kuye ukuqondiswa komkhiqizo kungasindiswa odongeni, ekupheleni kwefenisha, embhedeni womntwana.
Sinqamula ucezu olulodwa ngesisekelo samapokheji angu-80 cm no-35 cm ububanzi. Okulandelayo sidinga izingxenye ezingu-3 zamakamelo azayo kanye nobukhulu obungama-20 x 30 cm Ukuze senze amapokhethi aqhubekile, sizokwenza ububanzi obunamaphesenti angu-60 no-8 cm ububanzi. Lungisa i-oblique bake 4,5 cm ububanzi kuya izikhonkwane zokuqothula nomkhiqizo ojikelezayo.
Khona-ke udinga ukuzungeza emaphethelweni amakamelo ane-saucer. Amaphethelo angacutshungulwa phezu kwe-overlock noma umugqa "we-zigzag" ufakwa kumshini. Namathisela uhlangothi ohlangothini olubheke phambili ephaketheni bese ulinamathisela ohlangothini olungalungile. Sula, u-iron, uhlela nge-oblique bake ngaphezulu kwephaketheni, kufaka phakathi nomgwaqo.
Uma ufisa, ungafaka ibhande le-rabber ku-crochet, ulungise ukuphela emaphethelweni. Ngakho-ke silungiselela amaphakethe amabili. Bese ugoqa amapokhethi esisekelo, ubuka ibanga phakathi kwabo. Umhleli wezinto ezincane angagcizwa ngesandla, ukusika izingxenye zendwangu kanye nekhadibhodi enye ingxenye. Izingxenye ezimbili zithunga ezinhlangothini ezintathu, ukugoba, ukucubungula inqenqemeni engenhla, ukushiya kuvulekile ukubeka ikhadi. Emaphethelweni angaphandle omkhiqizo kufanele ahlanganiswe nezimpumputhe.
Kunoma iyiphi i-needlewoman inqwaba yezinto ezincane zibuthelela, phakathi kwazo yizinamitha ze-oblique beika, amabhande kanye nesikhumba sezinhlamvu ezihlukahlukene. Ukuze zonke lezi zinto zihlale zitholakala ngokushesha, kunengqondo ukwakha umhleli wezandla zobuciko ngezandla zabo. Indlela yokugcina izibhebhe ngokuhlukana nezinaliti, izinkinobho, izikhonkwane kanye nezinye izifo, sibheka kule ngxenye yendaba.
Ukwakha ibhokisi ngaphansi kwamadayiboni udinga ibhokisi elincane, indwangu noma iphepha lokunamathisela, i-glue, ama-eyelets, amathuluzi okufakwa kwawo, iphepha, amakhadibhodi ambala. Ibhokisi elifanele elinesivikelo esingenakususwa singathengwa eposini. Kusuka esihlalweni sokudinga udinga ukusika ikhadi elidlulele, ushiye kuphela phezulu. Uma ibhokisi limnyama, kufanele lifakwe ngephepha lokunamathisela, noma iphepha elimhlophe, futhi phezulu ngenhla. Futhi, umhleli uyadlula izicubu ngaphakathi. Zonke izibonelelo ezingaphakathi ngaphakathi kwesembozo kanye nebhokisi zihlotshiswe ngekhadibhodi enemibala. Okulandelayo, udinga ukufaka ama-eyelets esihlakalweni nasezinhlangothini zedraki ngosizo lwamathuluzi akhethekile. Manje ungabeka amakhoyili ngamabhande ebhokisini, futhi ekugcineni uphume emigodini engaphandle.
Isitoreji esikhethekile sobucwebe
Isixazululo esivusa amadlingozi sinikwa abaqambi ukuba bahlele indawo yokuhlobisa. Ngokuvamile lokhu kuyiphaneli elibekwe odongeni eduze kwetafula lokugqoka. Ukwenza umgqugquzeli wezingubo ngezandla zabo, kufanelekile ukucabangela ingaphakathi ekamelweni kanye nokwakhiwa kwetafula lokugqoka. Iphaneli kumele ihlanganiswe ngokufanele nemvelo ehambile. Ngokuvamile, i-baguette isetshenziselwa ukudala umhleli, lapho i-burlap noma i-tovas ye-embroidery ifakwe esikhundleni sesithombe. Ngezinye izikhathi indwangu ishintshwe ngetambo, inhlanzi yokudoba noma izibambo ezinemibala, lapho kufakwa khona amacici nezinwele zezinwele. Ukulenga ubuhlalu, ungakwazi ukugoqa kuhlaka oluhlotshiswe ngezinkinobho noma izikhonkwane ezincane zokuhlobisa.
Ukufingqa, singasho ukuthi abahleli bezinto ezincane bangenziwa kusuka kunoma yini. Into esemqoka ukucabanga futhi ungesabi ukuhlolwa.
I-trailer eyenziwe ngokwenza imoto: ukukhiqiza, ukubhalisa
Steel Ukugxilisa: grade, GOST, isigaba amandla. uhlaka steel
Indlela ukudlulisa imali ye-PayPal Sberbank ikhadi?
Izikhwama Trendy: ukukhanda, ukugcinwa kanye nokubuyiselwa